Mourinho oo shaaca ka qaaday sababta ay Lukaku iyo Sanchez kaga dhaqaaqeen kooxda Man United – Gool FM
Julen Lopetegui oo ammaanay Man United kahor kulanka ay isku wajahayaan wareega afarta ee tartanka Europa League
Horudhac: Atalanta vs Paris Saint-Germain – Shaxda ay ku soo geli karaan, Xaqiiqooyinka & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Champions League
Kooxaha Sevilla iyo Shakhtar Donetsk oo iska xaadiriyey afar dhammaadka Europa League & Isku aadka Semi-finalka oo soo dhammaystirmay
Mourinho oo shaaca ka qaaday sababta ay Lukaku iyo Sanchez kaga dhaqaaqeen kooxda Man United
Dajiye September 13, 2019
(England) 13 Sebt 2019. Jose Mourinho ayaa muujiyay fekerkiisa kaga aadan heshiisyadii ay kaga dhaqaaqeen xiddigaha Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez kooxda Manchester United inta lagu gudi jiray suuqii dhawaa ee xagaaga.
Mourinho ayaa laga ceyriyay shaqada tababarka ee kooxda Manchester United, kaddib mudo dhan labo sano iyo bar uu macalin ka soo ahaa, wuxuuna mudadaas macalin u soo noqday xiddigaha Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez.
Macalinka reer Portugal ayaa wareysi uu bixiyay wargeyska “Daily Telegraph” wuxuu ku sheegay:
“Romelu Lukaku wuxuu goolal badan u soo dhaliyay kooxaha West Brom, Everton iyo Manchester United, ku biiristiisa kooxda Inter Milan waxay ku saabsan tahay hamiga ciyaaryahanka”.
“Wuxuu doonayay isbedel halkii uu ka fikiri lahaa inuusan waxba ka qabanin garoonka Old Trafford”.
“Waxaan dareensanahay in Alexis Sanchez uusan ku faraxsaneyn kooxda Manchester United, ma fududa inaad shaqadaada qabatid adigoo murugsan”.
“Waxaa suurtogal ah inaan qaldanahay, waxaase laga yaabaa inaan aheyn shaqsiga la gaari lahaa isaga natiijooyin fiican, mararka qaar tababaruhu wuxuu banaanka keeni karaa faa’idooyinka ugu fiican ee ciyaartoyda, halka mararka qaarna uu ku guuldareysto”
“Xaqiiqdii, waxaan dareemay murugada Sanchez, gudaha Italy waxaa laga yaabaa inuu dib u helo dhoola cadeyntiisa waxaana rajeynayaa inay sidaas dhacdo”.
DAAWO: Goolkii ugu quruxda badnaa horyaalka Premier League bishii Agoosto oo la shaaciyay
Guardiola oo shaaca ka qaaday mudada uu garoomada ka maqnaanayo Aymeric Laporte